Zeziphi ezona mpawu ziphambili zohlobo lwe-K lwendlu esele yenziwe?
Ngapha koko, uhlobo oludwelisiweyo lwendlu engu-K lukwabizwa ngokuba luphahla lwendlu esele yenziwe. Yahlulwe yaziintlobo ezintathu: indlu yesiqhelo esele yenziwe, indlu esele ikhethiweyo kunye nendlu esele ikhethwe kwintengiso yangoku. Kule mihla, ngokweemfuno zabathengi, iimodyuli eziqhelekileyo ...
Zeziphi izibonelelo eziphambili zepakethe yendlu yokupakisha?
Nangona kunjalo, indlu yesikhongozeli seplathi yomelele kwaye yomelele, inovalo lomoya olungileyo, indibano ye-dis efanelekileyo kunye nendibano, ukusebenza ngokukuko, kunye nokumelana okuhle, okuthandwa kakhulu luninzi lwabasebenzisi. Ngapha koko, ipakethi yendlu yesikhongozeli yendlu yesakhiwo sisiseko kunye ...
Ngaba abavelisi bendlu abakhethwayo ngaphambili bayayiqinisa njani indlu esele ikhethwe ngaphambili?
Uhlobo lwe-K lwendlu esele yenziwe eyakhiwe luhlobo lwe-K lwendlu esele yenziwe ikakhulu kukuthambeka kwethambeka, ke oko ukuxhathisa komoya kunamandla, kwaye kunokumelana nomoya ongaphezulu kwenqanaba le-8. ngesakhiwo esilula sensimbi njengamathambo ...
Zithini izibonelelo zezindlu zeekhonteyina ezahlukileyo kwizakhiwo zemveli?
Zithini iinzuzo? Ulwakhiwo lwendlu yesikhongozeli esele ichongiweyo lubhekisa kwisakhiwo esidityaniswe kwindawo enamacandelo asele ekhethiwe. Izibonelelo zolu hlobo lwesakhiwo zizantya zokwakha ezikhawulezayo, ezingathintelwanga ziimeko zemozulu, ukonga abasebenzi kunye nokuphucula umgangatho wolwakhiwo. W ...
Ungayisombulula njani le meko yeendawo zokuhlala?
Ngoku, izikhongozeli zokuhlala zisetyenziswe ngokubanzi kubomi babantu bexeshana bemihla ngemihla. Kutheni ukhetha isikhongozeli oza kuhlala kuso? Oku kungenxa yokuba kulula ukuhamba. Kwimihlaba enje ngobunjineli nolwakhiwo, kude kube sekupheleni kwexesha lokwakha, indawo yokuhlala yabasebenzi nayo inokuphinda ikhethwe kwakhona ...
Kutheni le nto izikhongozeli zingasetyenziselwa ukwakha izindlu?
1. Isakhelo kulula ukusihlanganisa Wonke umntu uyazi ukuba indlu yesikhongozeli luhlobo lwesakhelo. Ukuma nkqo kunye nkqo zilunge kakhulu kwiimfuno zangaphambili zesakhiwo. Emva kokuba imizobo iyilelwe, iprototype yendlu inokugqitywa ixesha elide ...
Zingasetyenziselwa ntoni izindlu zeekhonteyina eziluhlaza nezikhuselekileyo?
Kwiminyaka yakutshanje, kuye kwaxhaphaka ngakumbi ukuguqula izindlu zeekhonteyina zibe yindawo yokuhlala abantu, iihotele, iibha zencwadi, indawo yokuhlala neendawo zeofisi. Izindlu zesikhongozeli ziye zanda ngakumbi nangakumbi ngenxa yenoveli kunye nembonakalo yefashoni, amaxabiso afikelelekayo, kunye nokukhuselwa kwendalo kunye ...
Ayintoni amathemba endlu yesikhongozeli?
Izikhongozeli eziphilayo ziqeshiswa ikakhulu kwiindawo zokwakha ukuze abasebenzi bahlale kuzo, kwaye abanye bathenga bucala kwaye baqeshisa ukuze basebenzise iiofisi. Olona loncedo lukhulu kwizikhongozeli eziphilayo kukuguquguquka kunye nokwenza lula. Kubahlobo abasebenza kwiindawo zokwakha entlango, ayiyiyo ...
Mhlekazi! Izikhongozeli zinokuzisa ulonwabo olunjalo
Igumbi lokufundela labahlali kwiindawo zentlekele zigcwele ithemba labantwana Emva kweentsuku ezininzi kangaka emva kwenyikima yaseYa'an eSichuan, abantwana kwindawo yentlekele banokuya esikolweni ngesiqhelo. Amagumbi okufundela akhiwe ziikhonteyina zokuhlala. Yonke imihla inde ngabantu ...
Ngawaphi amaxabiso okusetyenziswa kweekhonteyina izindlu ezihambayo?
E-Guangdong, abavelisi bendlu yeselfowuni abaqulathe izinto bakhawuleze ngokukhawuleza. Kukho ihotele eyilelwe kwaye yakhiwa ziziqulathi izindlu ezihambayo. Ubume bufana kakhulu nesikhongozeli, kwaye ngaphakathi inencasa eyahlukileyo. Umgangatho osezantsi wehotele ugqunywe ngumgangatho womthi odityanisiweyo. Th ...
Ikhonteyina Ihotele ngaselwandle / Holzer Kobler Architekturen + Kinzo
Ezi zikhongozeli ezingama-63 ezingama-25 zemitha ezazisetyenziselwa ukuthutha iimpahla zinqumle ulwandle ngoku zidityaniswe zaya kwiihotele. Abantu abanomdla wokuhamba bangaphupha ulwandle apha. Ihotele ibekwe Warnemünde. Ngenxa yokusetyenziswa kwezikhongozeli zempahla erisayikilishwe kunye nendawo eyingqayizivele yezibuko, i-h ...
Ukuba ufuna indlu ekhethekileyo, inguqu yesikhongozelo lukhetho olufanelekileyo
Isikhongozeli sisixhobo secandelo esinokulayishwa ngeempahla okanye izinto ezingafakwanga zipakishwe zokuhamba, ezilungele ukulayishwa, ukothula kunye nokuhambisa ngezixhobo zoomatshini. Lo ngomnye wemimangaliso emikhulu eyakha yenziwa luluntu. Nangona kunjalo, ukongeza kwezothutho, ...